Showing 1-10 of 587 items.
धरान । मोरङ प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट बहुमतले पारित गरेकोे छ । प्रदेशसभाको आइतबार बसेको बैठकले विधेयक पारित गरेको हो । ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख रूपैयाँको अनुमानित प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि संसदमा प्रस्तुत गरेको थियो । बजेटमा सडक, पूर्वाधार तथा शहरी विकासका लागि १२ अर्ब ४१ करोड ४२ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ भने कृषिलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । यसअघि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको तर्फबाट सांसद तुलसीप्रसाद न्यौपानेले १ सय रूपैयाँ खर्च कटौतीको प्रस्ताव सदनमा पेश गरेका थिए । सांसद न्यौपानेले राखेको प्रस्ताव अस्वीकृत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्
सरकारी कागजात किर्ते गरेको अभियोग लागेकी सांसदद्वारा राजीनामा
धरान । सरकारी छाप, दस्तखत र कागजात किर्ते गरेको अभियोगमा मुछिएकी प्रदेश १ की एमाले सांसद गुलेफुन खातुनले बुधबार पदबाट राजीनामा दिएकी छन् । खातुनले सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारीसमक्ष दिएको राजीनामा बिहीबार सभामुखले स्वीकृत गरेका छन् । अघिल्लो साता मात्रै सर्वोच्च अदालतले खातुनविरुद्धको सरकारी सहीछाप र दस्तखत कीर्ते मुद्दा दोहोर्‍याउन अनुमति दिन अस्वीकार गरेको थियो । सरकारी कागजात किर्ते अभियोगमा उच्च अदालत विराटनगरले दोषी ठहर गरेपछि खातुनले सर्वोच्चमा मुद्दा दोहोर्‍याउन माग गरेकी थिइन् । तत्कालीन कद्माह गाउँ विकास समितिमा रहेको ३ विघा १० कट्ठा जग्गाको मोही पाउनका लागि खातुनले २०७१ चैतमा
धरानको आ.व. ०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम पारित: असार २३ मा नगरसभा
धरान । धरान उपमहानगरपालिकामा निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिहरुले ११ औ नगरसभाबाट नीति तथा कार्यक्रम पास गरेका छन् । बजेट भने नगरसभामा प्रस्तुत गरिएको छ । आगामी नगरसभाले बजेट पास गर्ने बताइएको छ । शुक्रबार सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघको हलमा ११ औं नगरसभामा उपप्रमुख अइन्द्रबिक्रम बेघाले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मत पारित भएको हो । नीति तथा कार्यक्रममा धरानको धार्मिक, साँस्कृकृतिक, वहुभाषिक, शिक्षा, पर्यटन लगायतलाई समेटिएको छ । धरान उपनगरपालिकाका उपमेयर अइन्द्र विक्रम बेघाद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा धरानको बहुसाँस्कृतिक, बहुजातीय, बहुभाषिक संग्राहलयको रुपमा विकास गर्न पुर्वा
नेपालमा वैकल्पिक शक्तिको रुपमा नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी
धरान । नेपालमा वैपल्किक शक्तिको रुपमा नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीको उदय भएको पार्टीका केन्द्री अध्यक्ष रिजवान अन्सारीले बताएका छन् । विहीबार धरान २ देसिलाइनस्थित होटल नव युगको सभाहलमा आयोजित पार्टीको एक नं. प्रदेश समितिको घोषणासभामा बोल्दै पुर्व गृह राज्य मन्त्री समेत रहेका अन्सारीले देशमा अन्य दलबाट नेपाली जनताको चाहना पूरा हुन नसकेको बताउदै त्यसको विकल्पमा यो पार्टी विकल्पको रुपमा अगाडि आएको बताए । उनले भने– ‘वैकल्पिक शक्तिको रुपमा पार्टी आएको छ, देश र जनताको विकासमा पार्टी गम्भीर भएर लाग्छ ।’ कार्यक्रममा दिनेश राइको अध्यक्षतामा ५१ सदस्यीय १.प्रदेश समिति घोषणा गरेको छ । ज
जिसस उदयपुरमा गठबन्धनका उमेद्वार विजयी
धरान । उदयपुरको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखमा गठबन्धनका उम्मेदवार विजयी भएका छन् । प्रमुखमा एकीकृत समाजवादीका गौरबहादुर विश्वकर्मा र उपप्रमुखमा नेपाली काँग्रेसका तेजप्रसाद गिरी निर्वाचित भएका हुन् । कुल १६ मतदातामध्ये ११ मत प्राप्त गरेर विश्वकर्मा विजयी भएका हुन् । निकटतम प्रतिद्वन्द्वी एमालेका इन्द्रराज कार्कीले पाँच मतमात्र पाए । आठ स्थानीय तह रहेको गठबन्धनतर्फ काँग्रेसका सात, माओवादीका तीन र एकीकृत समाजवादीका एक मतदाता थिए । एमालेका पाँच मतदाता थिए । जिल्ला समन्वय समितिका सातजना सदस्यमा गठबन्धनतर्फका सबै उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन् । महिला सदस्यमा माओवादी केन्द्रकी गोमा कार्की, बिन्दाकुम